आलोचकलाई ओलीको कटाक्ष : म बाँचेकोमै चिन्तित छन् | Ratopati
आलोचकलाई ओलीको कटाक्ष : म बाँचेकोमै चिन्तित छन्
‘एमाले कसैले हल्लाउन नसक्ने बनाएर मात्रै छोड्छु’
नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्ना विरोधीहरु दुई वटा कुराले चिन्तित भएको बताएका छन् । आइतबार विधान महाधिवेशनमा प्रस्तावहरूमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा ओलीले यस्तो बताएका हुन् । ‘हाम्रा विरोधीहरु अहिले दुईवटा कुराले अत्यन्त चिन्तित छन्’, उनले भने, ‘एउटा म बाँचिरहेकाले चिन्तित छन् । यो बिमारी हुन्छ, अप्रेशन गर्छ, फेरि के गर्छ ? मेनेन्जाइटिस हुन्छ फेरि बाँच्छ । बिमारी भयो अब त होलाकि भन्यो फेरि बाँच्छ ।’
त्यस्तै उनले विरोधीहरु चिन्तित हुनुपर्ने अर्को कारण पनि खुलाए । उनले भने, ‘अर्को कुरा कार्यकर्ताले जनताले असाध्यै धेरै माया गर्छन् । त्यसले एमालेलाई फाइदा पुग्छ । जनता गोलबन्द हुन्छन्, त्यसकारण चिन्तित छन् ।’ अध्यक्ष ओलीले आफूमाथि देवत्वकरण गरेको हल्ला चलाएर भ्रम फिँजाएको पनि ओलीले आरोप लगाए ।
‘एउटा हल्ला चलाएका छन् । भन्ने गर्छन्– नेकपा एमालेमा बोल्नै पाइँदैन । उनीहरुले के खोजेका छन्, सोचेका छन् भने यहाँ बहुत झगडा भैदिए हुन्थ्यो, मारामार भैदिए हुन्थ्यो । कोही नेता स्थापित हुन नपाए हुन्थ्यो । सब खुइलिए हुन्थ्यो । सबैलाई खुइल्याउन पाए हुन्थ्यो’, उनले पार्टीभित्र अनेकथरी लाञ्छना लगाएदेखि त्यसैलाई समातेर भन्न पाइन्थ्यो भन्नेमा रहेको बताए ।
‘अनि उनीहरु देवत्वकरण कुरा उठाउँछन् । हामी कसैलाई देवता मान्दैनौ देवत्वकरण गर्दैनौ, तर लिडरसिप हुन्छ, लिडरसीपका वरिपरि पार्टी एकीकृत हुन्छ’, ओलीले आफूमाथि लागेको आरोपको खण्डन गरे । उनले त्यसरी नै आन्दोलन एकीकृत हुने भन्दै ‘त्यो स्वभाविक भएको बताए ।
‘पुष्पलालले अघि सारेका विचार वरिपरि हामी आजसम्म गोलबन्द भएका छेनौ ? कार्ल मार्क्सले अघि सारेका दर्शन सिद्धान्त वरिपरि गोलबन्द भएका छैनौ । लेनिनका वरिपरि सिंगै रुस गोलबन्द भएन ? माओका वरिपरि चीन गोलबन्द भएर क्रान्ति सम्पन्न गरेनन् ?’, ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय नेताहरुसँग तुलना गर्दै मदन भण्डारी र पुष्पलाललाई पनि देख्न नसकेको बताए । उनले नेतृत्व स्थापित भएन भने नाश्यन्ते बहुनायिका जस्तै हुने टिप्पणी पनि गरे ।
एमालेलाई कसैले हल्लाउन नसक्ने बनाएर मात्रै छोड्ने ओलीले बताए ।
एमालेको महाधिवेशनमा ब्यानर, तामझाम देखियो रे ! : ओली
५१ प्रतिशत नेपाली एमालेमा हुन्छन् : केपी ओली
हेटौंडामा आज काँग्रेस बागमती प्रदेश अधिवेशन, प्रधानमन्त्री देउवाले सम्बोधन गर्ने